Kordhinta, Qeybaha, Module & Plugins ee Joomla! - Joomla Xalka
Joomla-Solutions.com Kordhinta CMS Joomla!
Joomla ama WordPress?
U samee bog internet ah Joomla
Immisa dheereyn ah ayaan ku ridi karaa Joomla?
Waa maxay kordhinta loo xusho in la abuuro goobo Joomla ah?
Sidee loo rakibaa fidin ama moodeel Joomla?
Beddel Joomla Template
Sida loo abuuro degel lala yeesho Joomla?
Xirmooyinka waxyaabaha ku jira
Maqaallada - Faylasha
Maqaallada - rukumada
Maqaallada - Sawiro
Maqaallada - Digniinta E-maylka
Maqaallada - Dhacdooyinka
Maqaallada - Dhacdooyinka la bixiyay
Qaybaha, modules & plugins ee Joomla CMS!
JoomlAddComments Meel kasta
Xidhmadaan loogu talagalay Joomla oo ay ku jiraan qayb iyo qayb ayaa kuu oggolaanaya inaad ku darto aagagga faallooyinka bog kasta oo ka mid ah boggaaga.
Boggan wuxuu u oggolaanayaa dhexgalka "Badbaadinta" badhanka aaladaha isticmaalaha.
Qaybtani waxay soo bandhigaysaa daaqad modal ah oo "modal popup" ah oo qofka isticmaala weydiisanaya inuu xaqiijiyo da'diisa ka hor intuusan bogga gaarin.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad hubiso da'da isticmaalaha kahor intaadan marin bog loogu talagalay dadka waaweyn, tusaale ahaan.
Qalabkaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad maamusho cilaaqaadka ka dhexeeya xisaabaadka isticmaale ee Joomla.
Qalabkan wuxuu ku darayaa qaybta Bayoolajiga astaamaha isticmaaleyaasha. Aad ugu anfacaya ku darista waxyaabo hodan ah iyo wax badan oo ku saabsan qofka.
Qalabkaan loo yaqaan 'Joomla plugin' wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u soo dirto maqaal ama horudhac ah emayl koox isticmaale ama cinwaanno emayl ah.
Qalabkan loogu talagalay Joomla wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku dhex dhigaan fiidiyow Youtube ah oo ku jira muuqaalkooda.
Qalabkaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xirto liiska sawirrada maqaallada Joomla oo aad hoos ku muujiso.
Qalabkaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto sawir muuqaal ah xisaabaadka isticmaalaha Joomla. Si dhakhso ah oo fudud rakibaadda iyo qaabeynta.
Xirmooyinkaan 2 plugins ayaa kuu oggolaanaya inaad ku maamusho dhacdooyinka maqaallada Joomla.
Qalabkaani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku dhejiyaan fiidiyowga Vimeo ee ku jira astaantooda.
Qalabkan Joomla wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u isticmaasho maqaallada sidii xaashiyaha wax soo saarka. Looma baahna in la rakibo xal e-ganacsi culus oo qaadanaya waqti dheer in la isku hagaajiyo. Qalabkani wuxuu si toos ah ugu darayaa shaqeynta wax iibsiga toosinta maqaalka.
Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku dhejiyaan fiidiyaha Dailymotion ee ku jira astaantooda.
Boggan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xirto faylalka qodobbada Joomla oo aad ugu fidiso soo-dejin bilaash ah ama lacag la'aan ah iyada oo loo marayo plugin-ka dheeriga ah Maqaallada - rukumada.
Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay ku dhejiyaan fiidiyow TikTok astaantooda.
Ku qancay ama dib u soo celiyay
Haddii aad iibsatay mid ka mid ah alaabooyinkayaga oo aanu kuula mid ahayn, waxaan ballan qaadaynaa inaan si buuxda kuu soo celinno.
Ilowday aad Username?
Kordhinta caanka ah
Kordhinteena waa Joomla 3.x la jaan qaada.
Apache 2.0 iyo +
Nginx 1.0 iyo +
PHP 5.3.10 iyo +
MySQL 5.1 iyo +
SQL Server 10.50.1600.1 iyo +
PostgreSQL 8.3.18 iyo +
U adeegso Joomla qodobbada sida xaashiyaha wax soo saarka!
Horumarinta Joomla! Kordhinta
Kordhinta iyo dalabyadooda
Walxaha jilicsan ee midabada leh!
Xadhig la'aan ...
Halkan guji si aad uhesho goobta demo-ga
Plugins: Ku dar meel waxqabadka onContentPrepareForm
Sida loo beddelo qaabka Joomla
Ku shaqeyso goobtaada Joomla adiga oo adeegsanaya fiditaanno fudud oo fudud!
Ka ogow bogga hore ee boggeyga, ama menusyada, xulasho ballaaran oo sifooyin fudud iyo iftiin ah si loogu daro boggagaaga Joomla. Waxaad u adeegsan kartaa qalabkeyga, qaybaha iyo qaybaha si aad u kobciso websaydhkaaga, blogga ama Ecommerce adoo adeegsanaya Joomla CMS.
Waxaan sidoo kale ku siinayaa koorsooyin iyo casharro ku saabsan isticmaalka Joomla, sida sida loo isticmaalo shaxanka, sida loogu daro maqaal cusub, sida loo abuuro dukaan, loo abuuro modules, dib u eegis iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaad ka ogaan doontaa wax badan oo ku saabsan dhammaan wararka socda iyo inaad ku timaadid balooggeyga.
Nidaamyada maareynta waxyaabaha ugu caansan sida Drupal, Wordpress, Joomla, Jimdo, Prestashop ama xitaa Shopify, waxaan u doortay Joomla abuurista boggeyga bandhigga, baloogyada ama xitaa dukaamada internetka. Iyada oo ay leedahay guddiyadeeda jawaabayaasha css ee la jaan qaadi kara taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada, Joomla ayaa maanta ah aaladda ugu habboon ee lagu abuuro degel. Ma leedahay mashruuc oo aad rabto inaad si dhakhso leh u bilowdo? Raadi magacaaga domain, shabakad martigelin leh marinkeeda 'ftp' ee martigeliyaha aad dooratay, ka dib, rakib Joomla oo naftaada u oggolow inaad hagto qaabeynteeda fudud oo macquul ah. Haddii aad tahay horumariyayaal, sida aniga oo kale, waad sii sii dheereyn kartaa oo aad horumarin kartaa kordhintaada: sawirada slideshow, daaqadaha sawirka, slide image, widgets, nidaamka ogeysiinta, tabaruca paypal, maamulaha rukumada, maareeyaha faylka, nidaamka maaraynta faallooyinka, hubinta da'da, kalandarka iyo maaraynta dhacdo, buugga, is-dhexgalka fiidiyooga, maaraynta xayeysiis loo yaqaan iwm
Joomla, abuurista degelku waa deg degtaa. Ka faa'iideyso is dhexgalka maamulkeeda iyo tifaftireyaasheeda WYSIWYG si aad u kobciso waxyaabahaaga, u hagaajiso tixraacaaga dabiiciga ah, uga dhex muuqato matoorada raadinta, hesho qasabno iyo hagaajinta iibkaaga.
Fudud oo dareen leh, Joomla waxay ii tahay CMS-ga ugu fiican. Abuuritaanka bartaada waligeed ma sahlana.
dabeeco, oo ku takhasusay abuurista goobaha Joomla
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Joomla-Solutions.com - Dheeraadka, qaybaha, modules-ka iyo plugins-ka loogu talagalay Joomla.
Joomla! ® Magaca waxaa loo isticmaalay hoos imaad xadidan laga bilaabo Waxyaabaha laga soo xigtay ilo furan gudaha Mareykanka iyo dalal kale.
Joomla-Solutions.com aan ku xirnayn ama ay taageersan tahay Open Source Matters ama Joomla! Mashruuc.
SEO, Qoraalka Webka
Qorshaha site du